Murombo Asi Akapfuma Pakunamata | Nyaya Youpenyu
Mari Yokuita Basa Renyu Inobvepi?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Luo Malagasy Maltese Norwegian Nzema Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Murombo Asi Akapfuma Pakunamata
Yakataurwa naAlexander Ursu
Sekuru vangu nababa vaigara muimba isina kunyatsopera kuvakwa mumusha usina kubudirira weCotiujeni, uri kuchamhembe kwenzvimbo yava kunzi Moldova. Ndakaberekerwa mumusha uyu muna December 1939. Sekuru nababa vakanga vatova Zvapupu zvaJehovha mukutanga kwemakore okuma1930. Amai vangu vakavawo Chapupu pashure pekunge vaona kuti sekuru vainzwisisa Bhaibheri kupfuura mupristi womunzvimbo iyi.
Pandaiva nemakore matatu, baba, nababamunini nasekuru vakasungwa ndokuendeswa munzvimbo dzavaiitiswa mabasa anorema nemhaka yezvavaitenda sevaKristu. Baba vangu chete ndivo vakasara vari vapenyu. Pashure peHondo Yenyika II, muna 1947, baba vakadzoka kumusha asi vainge vatyoka musana. Kunyange zvavo vainge vakuvara, vakaramba vakasimba mukutenda.
KUCHINJA KWAKAITA UPENYU HWEDU
Pandakanga ndava nemakore 9, mhuri yedu yakasungwa pamwe chete nemamwe mazana eZvapupu zvomuMoldova, ndokuendeswa kuSiberia. Musi wa6 July 1949, takatinhwa ndokupinzwa muzvingoro zvaitakura mombe. Takafamba makiromita anopfuura 6 400 kwemazuva 12 tisina kumbomira, ndokuzosvika pachiteshi chezvitima cheLebyazhe. Mapurisa omunzvimbo iyi ainge akatimirira. Takaiswa mutumapoka tuduku uye nokukurumidza takaendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Boka redu rakaendeswa pane kamwe kachikoro kaiva kasisashandiswi kuti tinogara ipapo. Taiva taneta uye taora mwoyo. Mumwe mudzimai wechikuru wataiva naye akatanga kuimba imwe nziyo yakanyorwa neZvapupu muHondo Yenyika II, asingadudzi mashoko. Tose takabva tangotanga kuimba nemwoyo wose mashoko enziyo yacho tichiti:
“Hama dzakawanda dzakasungwa dzichiendeswa kunyika dziri kure.
Vakavaendesa kuchamhembe nekumabvazuva.
Pamusana pekuti vaiita basa raMwari, vakapiwa mitongo yakaoma uye vakatsungirira miedzo yakaipa zvikuru.”
Pasina nguva, takatanga kupinda misangano yokudzidza Bhaibheri musi weSvondo woga woga pane imwe nzvimbo yaiva makiromita anenge 13 kubva pataigara. Kakawanda taibuda mumba mangwanani-ngwanani munguva yechando kuchakasviba uye taifamba musinou yaisvika muchiuno uye kwaitonhora zvokusvika -40°C. Taimanikidzana mukamba kadiki-diki tiri 50 kana kupfuura. Taitanga nokuimba nziyo imwe chete kana kupfuura. Paizopiwa munyengetero womwoyo wose poteverwa nokukurukura mibvunzo yeBhaibheri. Taiita inenge awa imwe chete kana kupfuura. Taiimbazve dzimwe nziyo, tokurukura mimwe mibvunzo yeBhaibheri. Tainzwa tasimbiswa pakunamata!
Ndiri pachiteshi chezvitima muDzhankoy munenge muna 1974
Pakazosvika gore ra1960, Zvapupu zvakanga zvaendeswa kune dzimwe nyika zvakapiwa rusununguko. Kunyange zvazvo taiva varombo, ndakakwanisa kuenda kuMoldova, kwandakasangana naNina, uyo aiva nevabereki, nasekuru naambuya vaiva Zvapupu. Pasina nguva, takachata ndokudzokera kuSiberia uko kwakazoberekerwa mwanasikana wedu Dina muna 1964 uye mwanakomana wedu Viktor, muna 1966. Pashure pemakore maviri, takatamira kuUkraine uye taigara mukamba kaduku muguta reDzhankoy, raiva makiromita 160 kubva kuYalta, iri pachitsuwa cheCrimean.
MuCrimea mabasa eZvapupu zvaJehovha airambidzwa sezvazvaiva zvakaita muSoviet Union yose. Asi basa redu rainge risingarambidzwi zvakasimba, uye taisanyanya kutambudzwa. Saka izvi zvakaita kuti zvimwe Zvapupu zvitange kuneta pakunamata. Vakafunga kuti sezvo vakatambura zvakanyanya muSiberia, iye zvino yakanga yava nguva yokuti vachitsvaka pfuma.
Musi wa27 March 1991, basa redu rakabvumidzwa kuti rinyoreswe zviri pamutemo munyika dzose dzaiva pasi peSoviet Union. Nokukurumidza pakaitwa urongwa hwokuti pave nemagungano anokosha manomwe, emazuva maviri munyika yose. Isu taizopinda raiitirwa kuOdessa, muUkraine, iro raizotanga musi wa24 August. Ndakasvika pachine mwedzi kuti ndibatsire pakugadzirira nhandare yebhora yaizoitirwa gungano.
Sezvo taiswera tichishanda, taiwanzorara pamabhenji emunhandare iyi manheru. Mapoka emadzimai aiva Zvapupu akachenesa paki yaiva kunze kwenhandare iyi. Pakaraswa matani 70 emarara. Vaishanda mudhipatimendi rekutsvaka pokugara vakatsvakira pokugara hama dzinopfuura 15 000 dzaizobva kune dzimwe nyika. Asi takangoerekana tagamuchira mashoko anovhundutsa!
Musi wa19 August, mazuva mashanu gungano risati ratanga, aiva purezidhendi weUSSR panguva iyi vaMikhail Gorbachev vakasungwa vaenda kumbonozorora vari kunzvimbo yaiva pedyo neYalta. Takarambidzwa kuita gungano. Hama dzaibva kune dzimwe nyika dzakatanga kufonera hofisi inoona nezvemagungano vachibvunza kuti, “Toita sei nematiketi emabhazi uye ezvitima atakatenga?” Pashure peminyengetero yemwoyo wose, vaitarisira gungano vakavaudza kuti, “Chingouyai!”
Takapfuurira nokugadzirira uye nokunyengetera. Dhipatimendi rezvokufambisa rakatanga kugamuchira hama dzaibva munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemuSoviet Union, vachidziendesa kwadzaizonogara. Mangwanani oga oga hama dzeDare Remagungano dzaienda kunosangana nevakuru vakuru veguta. Manheru oga oga vaidzoka pasina kana chabuda.
KUPINDURWA KWEMINYENGETERO YEDU
Pangosara mazuva maviri kuti gungano riitwe, paChina chomusi wa22 August, hama dzeDare Remagungano dzakauya nemashoko anofadza: Taiva tabvumidzwa kuti tiite gungano! Takafara zvisingatauriki pataiimba nziyo yokutanga pachizoteverwa nomunyengetero. Pashure pepurogiramu yeMugovera, takatanga kukurukura nehama kusvika hwava husiku, tichisimbisa ushamwari. Pano paiva nevaKristu vaiva nokutenda kwakasimba, vainge vatsungirira miedzo yakaoma zvikuru.
Gungano romuOdessa, muna 1991
Iye zvino papfuura makore anodarika 22 gungano iri raitwa uye sangano rakura zvinofadza zvikuru. Pakavakwa Dzimba dzoUmambo muUkraine yose, uye nhamba yevaparidzi voUmambo yakawedzera kubva pa25 000 muna 1991 kusvika kuvaparidzi vanopfuura 150 000 iye zvino!
Mhuri yedu ichiri kugara muimba yedu yemuDzhankoy, muguta rava nevagari vanenge 40 000. Kunyange kwaiva nemhuri shoma dzeZvapupu patakasvika tichibva kuSiberia muna 1968, iye zvino pava neungano 6 muDzhankoy.
Iye zvino mhuri yangu yakura. Pava nezvizvarwa zvina zvinobvira patiri, vana vedu, vana vavo, nevana vevana vavo uye tose tichiri kushumira Jehovha.
September 2013 | Nei Paine Kutambura Kwakanyanya? Kuchapera Rini?
NHARIREYOMURINDI September 2013 | Nei Paine Kutambura Kwakanyanya? Kuchapera Rini?